လုံးချင်း တိုက် အငှါး
2.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | လုံးချင်းအိမ်
မြောက်ဒဂုံမြို.နယ်38ရပ်ကွက် လမ်းကျယ်ပေါ် ပေ40.60.မြေပေါ် တစ်ထပ်တိုက် အိပ်ခန်း 2ခန်းပါပြီး... ကျွန်းပါကေး ခင်း ရေမီးစုံ လုံးချင်း တိုက်
ကြည့်မြင်တိုင် ထီးတန်း(2)လမ်း တိုက်ခန်း ၄ လွှာ ငှားမည်
ကြည့်မြင်တိုင် ထီးတန်း ၂ လမ်း တိုက်ခန်း ၄ လွှာ (hall)ခန်းပါ ပေ=12×50 အငှား တစ်လ ၂ သိန်းပါ
30×60 ပေ တိုက်ခန်း အသင့်နေထိုင်နိုင်
ကမ်းနားလမ်းမပေါ် 30×60 (4)လွှာ HT ကြွေကပ် ရေမီးစုံ
မြေညီထပ် ငှါးရန်ရှိသည်။ ၁၉ ပေx၅၅ ပေ အကျယ် အမြင့် ၁၇ ပေ
-မြေညီထပ်၊ထပ်ခိုးပါ အကျယ် ၁၉ပေx၅၅ပေ ၊အမြင့် ၁၇ ပေ - Hall type ၊ အခန်းမဖွဲ့ရသေးပါ -ရေ ချိုး ခန်း ၁ ၊ အိမ်သာ ၁ ၊ မီးဖို ခန်းပါပြီး - ထောင့်တိုက် ၊ ထောင့်ခန်း -ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး ကျောကပ် -...
တိုက်ခန်းဌားမည် လမ်းမတော်12လမ်း.(12.5x50) ပထမထပ်.အခင်း.အခန်းပြင်ဆင်ပြီးဌားမည်
သမိုင်း ကုလား​ကျောင်းမှတ်​တိုင်​အနီး ​မြေညီ အငှား
သမိုင်းကုလား​ကျောင်းမှတ်​တိုင်​အနီး ​မြေညီ ​ပေ၂၀ ​ပေ၄၀ ရန်​ကုန်​အင်းစိန်​လမ်းမကြီးမှဝင်​လျင်​ ၄လုံး​မြောက်​ တစ်​လ ၂၅၀၀၀၀ ၆လချုပ်​ အကျိုး​ဆောင်​ခ တစ်​လစာ...
အောင်မြေသာစည် အိမ်ယာ အနောက်
ရန်ကုန် သိန်း ၁ထောင် ပထမထပ်အခန်းလေးရပါပြီ အမြန်ငှားမည် / ရောင်းမည် စံရပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့်အနီး PISM International School အနီး တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် ပထမထပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ဘုရားခန်း ၁...
အကျယ်-15ပေ × 60ပေ၊ အိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲကွန်း (၂)လုံး၊ ပါကေးခင်း၊ ပထမထပ် ပြင်ဆင်ပြီး
စမ်း​ချောင်း မင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ ပထမထပ်​တိုက်​ခန်း​လေးငှါးမယ်​​နော်​
12ပေခွဲ 60 သမိုင်းဈေးဘိုတာ၃လမ်း ဈေးရထားဘိုတာbusမှတ်တိုင်နဲ့နည်း
East Dagon land at the corner
200 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
Land at the , No.(138 ) ward ,East Dagon Township at the reasonable price.Very near to the market and Inn Wa Main road.Excellent for Investment. Proved Documents and price is negotiable. (40' * 60' ) land at the corner.
တာမွေ မေတ္တာညွန့်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေတိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။
780 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
တာမွေ မေတ္တာညွှန်. ဝဏ္ဏသိင်္ဂီလမ်း 25x55, 1375sq feet တိုက်ခန်းကျယ်အမြန်ရောင်းမည်။ တတိယထပ်(လေးလွှာ) ဓါတ်လှေကားမပါသည်ကလွဲ၍ကွန်ဒိုအတုများကဲ.သို. ကျယ်ဝန်းသော အခန်းကျယ် အမြန်ရောင်းလိုသည်။ လက်ရှိပေါက်ဈေးအရ 1sq Feet ကုို ၇၅၀၀၀ ကျပ်အနိမ်.ဆုံးရှိတဲ.နေရာပါ၊ အနိမ်.ဆုံးဈေးနဲ.တွက်ရင်ကုို သိန်း (၉၄၀)လောက်တန်ပါတယ်။ ဒါပြီး စအရောင်းတင်တဲ.အချိန်က ဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ.တွက်မယ်ဆုိုရင် ဒေါ်လာ 72,000 USD ကျော်ကျော်ကျခဲ.ရာက လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ.ဆုိုရင် 62000 ကျော်ကျော်ပဲကျတော.တာဖြစ်တဲ.အတွက် ဒေါ်လ...
ခြံ (5ဧက) စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူ ရေးခြံ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။(ညိုနှိုင်း)
700 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
ညောင်နှစ်ပင် အထူးစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ ရေးဇုံ (၂) ခြံအမှတ်(363) C11 M1 နှင့် M5 လမ်းမကြားတွင်တည်ရှိသည်။ ရာဘာပင်နှင့်အသီးပင်များစိုက်ပျိုးထားသည်။
သမိုင်း မုဒိတာအိမ်​ယာအနီး ပြင်​ဆင်​ပြီး ပထမထပ်​​ရောင်းမည်​
သမိုင်းမုဒိတာအိမ်​ယာအနီး အထက်​ဗဟိုလမ်း မှ ၅အိမ်​ခန့်​သာဝင်​ရ​သော ​တိုက်​ခန်းွှေရဝါ​မြေလမ်း တွင်​ ၁၈​ပေ၃၅​ပေအကျယ်​အဝန်းရှိ ပထမထပ်​ တိုက်​ခန်း အခန်း၂ခန်းပါ ဘိုထိုင်​ မီးဖို​ချောင်​​​​ကြွေပြားခင်း ​​ကြွေပြားကပ်​ ပါ​ကေးခင်း မီးအလှဆင်​ပြီး ​ရောင်းမည်​ ၃၀၀သိန်း ၀၉၂၅၄၇၄၁၂၄၂...
580 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေမြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းမည် ( သိန်း ၅၈၀ - ပါးပါးညှိ) တိုက်အမှတ် ၂၉ / တောင်ဥက္ကလာ (၁၃ ရပ်ကွက် ) အနော်မာ -၂ လမ်း မြေညီထပ် ( ခေါင်းရင်း ) BCC ကျပြီး အကျယ် ၁၄×၅၄ အမြင့်၉ပေ / ထပ်ခိုးမပါ Master Bed room တခန်း / ရိုးရိုး တခန်း Air con - ၂ လုံး / water heater / pressure pump နှင့် တအိမ်လုံး ခြင်လုံသံဇကာ နှင့် နံရံအားလုံးကြွေပြားကပ်ပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။အရှေ့မြောက်အရပ်မနက်နေရောင်ကျ၍၊နေလယ်၊ညနေ နေရိပ်သည်။ (၂၄)ပေကျယ်ကွန်ကရစ်လမ်း၊မိုးတွင်းလမ်းမပေါ် ရေမတင်၊မေတ္တာ...
750 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
*** မင်္ဂလာပါ *** 🎆 တိုက်ခန်းရောင်းမည် 🎆 🎆 ၅၁ လမ်းအလယ် 🎆 ၈ လွှာ 🎆 ပြင်ဆင်ပြီး 🎆 တိုက်ခန်းအကျယ် = ၂၅ ပေ × ပေ ၆၀ 🎆 ရောင်းဈေး= သိန်း ၇၅၀ ( ညှိနှိုင်း ) 🎆 ☎️ တိုက်ခန်းကြည့်လျှင်(၁)ရက်ကြိုတင်ဖုန်းကြိုဆက်ပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့်။ ( Yan Lin ) 📲📲09966899432 📲📲09784677065 💁‍♂️💁‍♂️လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကွန်ဒို၊ တိုက်ခန်း၊ လုံးချင်း၊ မြေ ရောင်း/ဝယ်/ငှား လိုပါက ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံနိုင်ပါ...
အသင့်နေ BCCကျပြီးအခန်း ရောင်းမည်
BCC ကျပြီးတိုက်ခန်း ပထမထပ် (ဘယ်/ ညာ) ၂ ခန်းရောင်းမည်။ ပထမထပ် တိုက်ခန်း အခန်းကျယ် / ကားပါကင်ပါ /အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ပြီးကြောင်းလက်မှတ်ရ / လျှပ်စစ်မီတာတပ်ဆင်ပြီးအသင့်နေထိုင်နိုင်သော တိုက်ခန်း တောင်ဥက္ကလာပ ပါရမီဘေလီတံတားအဆင်းမှ ၃ မှတ်တိုင်အကွာ ဦးဝိစာရလမ်းမကြီးမှဝင်ပါ (ပါရမီလမ်းမှ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းသို့၁၀ မိနစ် ပြည်လမ်းသို့၁၅ မိနစ်) ဒဂုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ် (41) ရပ်ကွက် ရွှေဖိခိုင်ညှာလမ်း အခန်းအကျယ် ၁၈ x၅၂ ပေ အခန်းတိုင်း ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်မီတာ - ရေမော်တာ ( မြေအောက်ရေလှောင်ကန်စနစ်) - ...
420 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
အင်းစိန် ‌အောင်သ‌ပြေလမ်း ဒုတိယအထပ် | ၂၈‌ပေ ‌ပေ၃၀ |အိပ်ခန်း ၁ | အခန်းကျယ် ၁ | ဧည့်ခန်း ၁ | ထမင်စားခန်း ၁ | BCC ရပြီး| ဆိတ်ညိမ် | ရုံးခန်း လုပ်ရန်အဆင်ေ ပြ
490 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း